TuneUp အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
21-07-2008, 06:15 PM
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျာ Tune up utilities အသုံးပြုပုံ ပြုနည်း ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ သိပြီးသား သူငယ် ချင်းမိတ်ဆွေ များကိုတော့ sorry ပါဗျာ မသိရှိသေးသော သူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မယ် ယူဆလို့ တင်ပြလိုက်ပါရစေ TuneUp Utilities 2008 ကို စံထားပြီး ဆွေးနွေးသွားပါမယ် .....................
Tuneup ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Window operation system ကို ပိုမိုမြန်ဆန် ၊ ကောင်းမွန်၊ သွက်လက်လာ အောင် mouse click လုပ်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ utilities ပါ။ ဒီလိုဆွေးနွေးပြောကြားရာမှာ ပိုမို လွယ်ကူသွားအောင် Category (၆) ပိုင်း၊ module လေးတွေ ခွဲပြီး ဆွေနွေးသွားပါမယ် .................
Category – increase performance
Harddisk မှာ တစ်စစီပြန့် ကျဲနေတဲ့ file တွေ ကို စနစ်တကျ ပြန်လည်စိရီပေးခြင်း၊ window လုပ်ဆောင်နိုင်မှု့ ပမာဏကို မြင့်တင်ပေးခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Window StartUp မှာ applications တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ module လေးပါ ( ဥပမာ- လိုအပ်တဲ့ application တွေကို automatic start လုပ်ခြင်း၊ မလိုအပ်တဲ့ Application တွေ ကို Automatic start မလုပ် စေခြင်း)
System , system configuration , internet တို့ကို speeds up ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
Registry ထဲက physical errors တွေကို ပြုပြင် မှန်ကန်သွားစေခြင်းပြန်လည်စီရီပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ် မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ remove လုပ်နိုင် Disk system ထဲထိ virus ၀င်နေတဲ့ အခါ backup ပြုလုပ်လိုတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။
၂။ Windows function
ဒီ module လေးကတော့ User တိုင်းအတွက်မလိုအပ်ပါဘူး( ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါမှ မသုံးဘူးသေးပါ..:P)
Hibernation (hibernation n. A state in whichacomputer shuts down after saving everything in memory to the hard disk. When the computer is powered on, programs and documents that were open are restored to the desktop. See also standby. )ကို အသုံးပြုတဲ့ user များအတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်အဲ window messenger ကို မျက်စိ ရှုပ်နေသူများကတော့ ဒီမှာ အလွယ်တကူ remove
တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ module လေးပါDrives မှာရှိတဲ့ errors တွေကို ရှာဖွေပေးခြင်း၊ မှန်ကန်အောင် ပြုပြင် ပေးခြင်း တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ် ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာ စတင်အသုံးပြူခါစ က ကွန်ပျူတာ ကို ဟိုကလိ ဒီကလိ လုပ်လိုက်တာHarddisk E ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ shutdown ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ Virus စစ်ကြည့်တော့ လဲမတွေ့ဘူး ဗျ အဲဒါနဲ့ ဒီ module လေးနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတော့တယ် ဗျာ ( ဒီ doctor က ခြေကြွခ မပေးရ ပေလို့ပဲ … )
ဒီ tool လေးကလဲ တော်တော်အ သုံးဝင်ပါတယ်Software တစ်ခုကို uninstall လုပ်လို့မရ C ထဲမှာ သွားဖျက်လို့ လဲ မရ ဖြစ်နေတဲ့ အခါမျိုးတွေ မှာအလွယ်တစ်ကူ ဖျက်နိုင် ပါတယ် Kesper တင်ပြီးပြန် ဖြုတ်လို့ မရ ၊ ဖျက်လို့မရ ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ . ဒါလေးကိုသာ အသုံးပြု ကြည့်လိုက်ပါ အိုကေ စိုပြေသွားမှာပါသတိပြုစေ လိုတာကတော့ ဒါနဲ့ ဖျက်ထားတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ခေါ်လို့ မရပါဘူးဗျာ ...။
Add or Remove program ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်Add or Remove မှာ လို programs ၂ခု ၃ ခု လောက် uninstallလုပ်လိုက်ရင် ရွေ့ မရ ပြုမရနဲ့ ကြောင်စီစီ ဖြစ်သွားတာ မျိုးမရှိပါဘူး Uninstall လုပ်ပြီးပေမဲ့ entry ကျန်ခဲ့တာ မျိုးကို လဲ တစ်ခါထဲ remove လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
Last edited by ကိုဖြိုးငြိမ်း; 15-08-2009 at 11:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 56 ဦးတို့မှ ကိုဖြိုးငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, ဆန်းသွေးလင်း, ဇရက်, ဇီးရိုး, ပုလဲဖြူ, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖိုးကံကောင်း, ဖယောင်း, လမ်းပြကြယ်, လုလု, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ကျော်(ကန့်ဘလူ), ဝင်းအောင်, ဟိန်းသူအောင်, အကစ်(စ်), အပယ်ခံ, ကျော်ထက်ချိန်, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, အောင်ကျော်ဆန်း, အေးမင်းမောင်, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, aozora, Aung Aung, aung174, AZM, blackNwhite, bonge, fieldmarshal, ko myo, kozaw, kozaw126, kyawkyi123, LaMike, lulin, moe gyi, nay nyo yi, nss, nyinyi mt, pannuko, phyomyintthein, phyothuhein, PyaungG, rawunna, royalheartgate, saiwaihin, sawlinux, swansein, theinhan, thureinsoe, tu tu, winntun
18-02-2009, 02:33 AM
ပြန်စာ - TuneUp အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာ ....ကျနော့်လိုစတင်လေ့လာနေသူအတွက်တော့ အဲဒါလေးရှိမှထင်တယ်နော်အစ်ကို
ကျနော် အဲဒါလေး လိုချင်တယ် အစ်ကိုရာ
အစ်ကို့ အသေးစိတ် ရှင်းပြနော်
ွှTuneUp သုံးခြင်းဖြင့် ဆိုးကျိုး၊ ကောင်းကျိုးများကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပေးပါနော် ကျွန်တော်က အခုမှဒီနယ်ပယ်ကိုရောက်ခါစမို့လို့ပါ သိပ်ပြီးတော့လည်း မကလိရဲ အဲဟုတ်ပါဘူး မစမ်းရဲသေးတာပါ..........
ဖြစ်နိုင်ရင် ရှင်းပြစေခြင်ပါတယ်........ ဒီထက်မက ကိုဖြိုးငြိမ်း ပညာတွေတိုးတက်ပါစေ......
ကိုဖြိုးရေ...Tune up utilities ကောင်းကြောင်းတော့သိရပြီ...ငှက် သုံးချင်လို့ ..ဘယ်မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမလဲ ပြောပေးပါအုံး....ကျေးဇူး
ကိုဇင်ယော်ရေ အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ ..................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကိုဖြိုးငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဇော်နန်း, ဖယောင်း, လူမုန်း
အခုလိုမသိတာတွေကို သိအောင်ပြောပြပေးတဲ.အတွက် ဖိုရမ်က အကို အမတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်......
ကျွန်တော်လည်းအခုမှ ကွန်ပျူတာစပြီးလေ.လာရမှာဆိုတော. တော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်.......
17-07-2009, 02:34 PM
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 26 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
serial key တွေက မရတော့လို့ပါ
This is not an original version
ဆိုတဲ့ စာသားပါတဲ့ box တက်နေလို့ ပြောပေးပါအုံး။
17-07-2009, 03:50 PM
Tune up Ultilities 2009 ပါ
Serials Keys များ အလုပ်လုပ်ပါတယ်အကို................................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ cherry အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုတို့ရေ.... tune up utilities မှာ fix problems အောက်မှာ 1problem has been detected ဖြစ်နေတယ်...detail ကြည့်လိုက်တော့ prefetch data deleted ဆိုပြီးပေါ်တယ်...အဲဒါဘယ်လို ပြန်လုပ်ရမလဲ သိကြရင် ပြောပေးကြပါ... problem ပေါ်နေလို့ ကွိုင်တက်မှာစိုးလိုိ့ပါ...ကျေးဇူးပါ...
ကိုနိုးတူးရေ - တစ်ခုလောက် အကြံပေးချင်တာ မေးခွန်းကို တစ်နေရာတည်းမှပဲ မေးပေးပါ - တစ်ယောက် မဟုတ် တစ်ယောက်တော့ တွေ့ပြီး တတ်နိုင်သမျှ ဖြေပေးကြပါလိမ့်မယ်။ ခု ကိုနိုးတူးက ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်တော့် Thread မှာလည်း မေးထား - ဒီမှာလည်း မေးထားတာ တွေ့မိပါတယ် - အဲတာက ဖြေပေးသူ တစ်ယောက်အတွက် နှစ်ခါဖြေပေးရမလိုဖြစ်ပြီး - တစ်ခြား သတိမထားမိသူ စာဖတ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း မဖြေပေးထားတဲ့ နေရာက မေးခွန်းကိုတွေ့ရင် မေးထားတာ ခုထိလည်း မဖြေပေးသေးဘူး ဆိုပြီး ဖိုရမ်အပေါ် အမြင်စောင်းနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီ Thread နဲ့က ပိုဆိုင်တာမို့လို့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ကိုနိုးတူး ဖြစ်နေတာ ဒီလိုပုံစံမျိုး ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မပူပါနဲ့ - ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး - ဒါက အသိပေးတာပါ - ဒါကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆို ကျွန်တော် အပေါ်ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့2problems /3problems စသဖြင့် ပေါ်နေတဲ့ နေရာကနေ Click ပေးလိုက်ပါ။ အဲတာဆို ခုလိုမျိုး box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကနေ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက် ဆိုတဲ့ နေရာက စာကို ဖတ်ကြည့်ပြီး သူလုပ်ခိုင်းတာ ကို လုပ်ဆောင်ပါ။
အဲတာဆို fixed ပြီးသား ဖြစ်ပြီး Status က စိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က သူလုပ်ခိုင်းတာ မလုပ်ချင်ဘူး - လောလောဆယ်လည်း မအားသေးဘူး - နောက်မှ လုပ်မယ် - ဒါမှမဟုတ် သူပြောတာက ကိုယ့်အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆရင် ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Hide Problem ကနေ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာ ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ ဖော်ပြချက်ကို Hide ခိုင်းထားလိုက်တာနဲ့ Status ကလည်း အလိုလို စိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံမျိုးပါ
နောက်ပြီး TuneUp 2010 အသုံးပြုပုံအကြောင်း အသေးစိတ် သိချင်တယ် ဆိုရင် Manual ဒီနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ အဲတာကို Download ချပြီး ဖတ်ပါ။
Last edited by KznT; 20-08-2010 at 01:25 PM..
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, arkaraung, bonge, hellboy, phoetharlay
20-08-2010, 02:27 PM
ဆောရီးပါ ကိုKznT, အကိုပြောတဲ့ ညွှန်ကြားချက်နေရာ မှာ
Make sure that neither you nor your programs delete the files in the prefetch folder.
ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်... သူပြောထားတာကို ကျွန်တော်နားလည်တာက prefetch folder ထဲက files ကိုဖျက်လားမဖျက်လား ဆိုတာ သေချာအောင် စစ်ခိုင်းတာထင်တာပဲအကို...
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဖျက်မိပီထင်တယ်...
ကွန်ပြူတာ မြန်အောင် prefetch ထဲကအားလုံး ဖျက်ရတယ်လို့ ပြောလို့ ဖျက်လိုက်မိပီ
Last edited by KznT; 20-08-2010 at 02:36 PM..
ဟုတ်ကဲ့ Prefetch Folder အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာ မေးလာတော့ Prefetch Folder ဆိုတာ ဘာလဲ - ဘာကြောင့် သူတည်ရှိနေလဲ ဆိုတာနဲ့ ပြန်စမှ ဖြစ်ပါမယ်။
Prefetch Folder ဆိုတာ ဘာလဲ ??
Prefetch Folder ဆိုတာ ဘာကြောင့်တည်ရှိနေလဲ ဆိုရင် ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာ ဖွင့်လိုက်တယ် - ကွန်ပြူတာ စဖွင့်တိုင်း ဖွင့်တိုင်းမှာ Computer ကို ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကနေ စပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ် - ပုံမှန်အနေနဲ့ ဘယ် Program တွေကို အရင်ဆုံး စ Run ရမယ် ဆိုတာကို Windows ကနေပြီး Record လုပ်ထားပါတယ်။ အဲလိုမျိုး ဘယ်ဟာကိုစ ဘာကိုလုပ်ဆိုပြီး အကြောင်းအချက်အလက်တွေကို Record လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူက files သေးသေးလေးတွေ အဖြစ်နဲ့ prefetch folder ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားပါတယ်။ အဲလို ထည့်သိမ်းထားခြင်း အားဖြင့် ကွန်ပြူတာကို ပိတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ကွန်ပြူတာပြန်ဖွင့်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ Windows က အဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်ညွှန်းပြီး ဘာကို လုပ် - ဘာကိုလုပ်ဆိုတာကို ( ၁ ) ကနေ ပြန်စလုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ - သူ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သူ အလွယ်တကူ ပြန်ဆွဲ ခေါ်ယူပြီး လုပ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ထူးခြားသွားချက်ကတော့ ဒီ prefetch folder ထဲမှာ files တွေ ရှိနေခြင်း အားဖြင့် Windows ရဲ့ Start Process ကို ပိုပြီး မြန်ဆန်လာစေပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ prefetch folder ဆိုတာ သူ့ဘာသာသူ နေတဲ့ folder ပါ - ကျွန်တော်တို့က သွားထူးပြီး Delete လုပ်တာ ရှင်းတာမျိုး လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး - တကယ်လို့ လုပ်လိုက်မိရင် Windows စအတက်မှာ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကွန်ပြူတာက အလွယ်တကူ မသိတော့ပဲ ( ၁ ) ကနေ စပြီး ပြန်ဆွဲ ခေါ်ယူနေရတာတွေ - အရင် ပွင့်နေကျ programs တွေ Windows တက်အလာမှာ မပွင့်တော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲတော့ မေးစရာ ရှိလာတာ Prefetch folder ထဲက Content တွေဆိုတာ လုံးဝကို ဖျက်လို့ မရဘူးလား - မဟုတ်ပါဘူး - Prefetch folder ထဲက Content တွေကို ဖျက်ရင် မကောင်းဘူး ဆိုပေမယ့် Prefetch folder ထဲမှာ Content တွေများလာပြန်ရင်လည်း System က နှေးသွားတတ်ပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Program တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ စဖွင့်ပြီး သုံးလိုက်ရင် ဒီ Program ကိုပဲ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖွင့်သုံးတဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ Access လုပ်နိုင်အောင် Windows ကနေပြီး program ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ကို အလိုလျောက် Copy ကူးပြီး Prefetch folder ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက program ကိုဖွင့်သုံးတာ မှန်တယ် - ဒါပေမယ့် တစ်လနေလို့မှ တစ်ကြိမ်လောက် ဖွင့်သုံးလေ့ ရှိတဲ့ program မျိုးရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ကို Prefetch folder ထဲမှာ Copy ကူးပြီး ထည့်ထားခံရတယ် ဆိုတာမျိုးကျတော့ hardware resources ကို မလိုအပ်ပဲ အများအပြား ယူသုံးခံထားရသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆိုလိုတာ အဲလို Prefetch folder ထဲမှာ ကိုယ်တကယ်မသုံးမလိုပဲ Copy ကူးပြီး ထည့်ထားခံရတဲ့ ပမာဏတွေ များလာတဲ့နဲ့ အမျှ hardware resources တွေ ဖြစ်တဲ့ memory နဲ့ hard disk space တွေ ကိုယ်က ဆုံးရှုံးလာပါတယ်။ အဲတာကြောင့် တစ်ချို့ လူတွေက Prefetch folder ဆိုတာ ဘာလုပ်မှန်းမသိပဲ Prefetch folder ထဲက ဟာ ဆို ဖျက်ရမယ်ဆိုပြီး အသေမှတ်နဲ့ နေ့တိုင်းဖျက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Prefetch folder ထဲက files တွေဆိုတာ ဖျက်ချင်လည်း ဖျက်ပါ - မဖျက်ချင်လည်း မဖျက်ပါနဲ့ - ဒါပေမယ့် ခဏခဏ ဖျက်တာမျိုး နေ့တိုင်း ဖျက်တာမျိုးကတော့ မကောင်းပါဘူး - ဖျက်တဲ့ အချိန်မှာ ဖျက်လို့ မရဘူး ဆိုပြီး တက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေကိုတော့ လုံးဝ ( လုံးဝ ) ကြိုးစားပြီး မဖျက်ပါနဲ့ - Prefetch folder ထဲက files တွေဖျက်ဖျက်ပြီးချင်း နောက်ပိုင်း Windows အတက်တွေမှာ မသိမသာ နှေးသွားနိုင်ပေမယ့် နောက် ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Tuneup က လောလောဆယ် အော်နေတယ် ဆိုတာလည်း အဲတာကို အော်နေတာပါ - Windows Performance ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှာ စိုးပြီး သူက အသိပေးနေတာပါ - အကောင်းဆုံး အကြံပေးလိုတာကတော့ ဖျက်ပြီးသားဟာ အတွက် စိတ်ထဲ ထည့်မနေပါနဲ့ - အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားသလို Hide Options ကနေ Permanently Hide ထားလိုက်ပါ။
Last edited by KznT; 20-08-2010 at 03:21 PM..
ဝင်းအောင်, ဇေယျာအေး, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, bonge, hellboy, kyaukphyu, moe_poung, phoetharlay, PyaungG, tu tu
22-08-2010, 08:03 PM
Tune Up ထဲမှာ ပါတဲ့ shredder activation code လေးရှိရင် ကူညီပေးကြပါဗျာ... သုံးနေတာ Tune Up Utilities 2010 ပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
14-11-2010, 10:41 AM
အကိုရေ ကျွန်တော်ကလည်း ကျေးဖူးအရမ်းတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်
Find More Posts by မောင်ကျော်လွင်
Tune Up Utilities 2011 အတွက် လိုင်စင်ကီးပါ ဆော့ဝဲလ်ကိုတော့ မူရင်းဝက်ဆိုဒ်မှာပဲ ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/
Tune Up Utilities 2010 အတွက် လိုင်စင်ကီးပါ ဒါကတော့ ဗားရှင်းအဟောင်းသုံးသူတွေအတွက်ပါ ဖိုရမ်ထဲမှာ တင်ပြီးသားတွေလဲ ရှိပါတယ် ကျွန်တော့မှာ ရှိတာက ပိုများသလားလို့ ဟဲဟဲ တူနေရင်တော့ ဖျက်ပေးကြပါဗျာ
Genuine serial by @KuMaSat:
Company: Your name
Some serials gen. with keygen CORE:
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ soehtetpaing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
phoetharlay, swansein, thureinsoe
Originally Posted by ကိုဖြိုးငြိမ်း
Tuneup မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့  Boot screen, Logon Screen,
အရင်တုန်ကကျွန်တော်တို့  Boot screen, Logon Screen,
ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့မဆို resource hacker ကိုယ် ညွန့်ကျတယ်
beginner တစ်ယောက်က resource hacker ကိုသုံးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး
Last edited by tu tu; 11-12-2010 at 06:47 PM.. Reason: edit quote
23-12-2010, 07:14 PM
[quote=soehtetpaing;194021]Tune Up Utilities 2011 အတွက် လိုင်စင်ကီးပါ ဆော့ဝဲလ်ကိုတော့ မူရင်းဝက်ဆိုဒ်မှာပဲ ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/
အကို ရေ လိုင်စင်ကီး က အလုပ် မလုပ်တော့ လို့ ... ရှိရင် ပြန်တင်ပေးပါအုန်းး........
အစ်ကို sagayork ခင်ဗျာ၊ key က ကျွန်တော်ဆီမှာ အလုပ်မလုပ်ပါ။ အစ်ကိုဆီမှာ ရှိသေးယင်ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာ။
Last edited by bagothar85; 06-01-2011 at 07:51 AM..
ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့ကမှ အင်တာနက်ထဲ တောင်မြောက်လျှောက်ကြည့်ရင်း ကောက်စွဲလာတဲ့ Tuneup နောက်ဆုံး version - TuneUp Utilities 2011 v10.0.3000.101 ပါ - key တွေလည်းပါပါတယ် -
Last edited by KznT; 06-01-2011 at 04:25 PM..
ကိုဦး, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, arkaraung, bonge, hellboy, phoetharlay, swansein
tune up မှာ w apperance ဆိုတာရှိပါတယ်...ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မိလဲမသိဘူးဗျ....aero style ကိုပြောင်းသွားတယ်...
ကြည့်ရတာသိပ်မလန်းလို့ ပြန်ပြောင်းချင်တယ်...ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲသိဘူး.....ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြောပြစေချင်ပါတယ်....ပီးတော့ tune up ကိုဒေါင်းပီးမှပဲ gtalk chat မှာမြန်မာလိုမဖတ်တော့ဘူး....မေးလ်နဲ့ချက်ရင်တော့ရတယ်...အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိလို့ဒီအထဲမှာပဲ မေးလိုက်တာပါ...ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိလျက်
software guide, software howto, tuneup
Tune Up Utilites collection kothu Applications 59 09-09-2013 09:49 PM
Window အတွက်အခြေခံလမ်းညွန်ချက်များ shadeboy Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 55 21-08-2010 10:51 PM